Ikotishi elithulile elinendawo - I-Airbnb
Ikotishi elithulile elinendawo
Les Rousses, Bourgogne-Franche-Comté, i-France
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Jose Ariel
U-Jose Ariel Ungumbungazi ovelele
I-Gîte phakathi kwechibi nentaba, ivulekile kubantu abangu-6, ukufinyelela kalula ngezindawo zokupaka ezizimele, ezizungezwe imvelo edolobhaneni lase-Les Rousses, amakhilomitha angu-2 ukusuka enkabeni.
Indlu eseduze nemithambeka yokushushuluza, amamitha angu-500 ukusuka endaweni yokudlala igalofu kanye nechibi kanye ne-GTJ (Grande Traversée du Jura)
Ilungele ukwenza izintaba ezinhle nemindeni noma phakathi
abangani futhi ujabulele ukubuka kanye nezwe elizungezile.
Eduze kakhulu nomngcele waseSwitzerland (imizuzu emi-2 ngemoto), imizuzu engama-40 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseGeneva naseLake Geneva
I 70 m2 efulethini yakhiwa ephezulu 2 okulala-10 m2 ngasinye 1 umbhede double nasekamelweni 2, imibhede emibili embhedeni ka 90, 1 lokugezela elineshawa, WC ehlukile, phansi phansi 1 egumbini lokuphumula nge ekhishini evulekile 30 m2 enekhishi elinemishini, umshini wokuwasha izitsha, ihhavini ye-microwave, i-induction hob, ifriji, umshini wokuwasha, i-flat screen TV ene-wifi kanye nombhede ongusofa ongu-1 wabantu abangu-2.
Ingadi ehlangene yangasese enokufinyelela kusuka ekamelweni elikhulu
Ilungele umndeni wabantu abangu-4.5 noma abangu-6
Kutholwe emaminithini angu-5 kusukela ski resort lokuqala (Les Jouvencelles kanye Dole Massif), indlu ngeke ukukunikeza umbono omangalisayo kwechibi futhi yokudlala igalofu (ngemizuzu engaphansi kuka-2 kude). Leli dolobhana isendaweni ngawe ukuthola zonke izici zesifunda!"
Ibungazwe ngu-Jose Ariel
"Incwadi" iyatholakala kubavakashi bethu (iseluleko esisebenzayo, izindawo zokudlela, njll.), kanye nemibhalo yezivakashi."
UJose Ariel Ungumbungazi ovelele